Nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè gị gburugburu Crater Lake? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Crater lake igwe kwụ otu ebe 2015 - esi lebara
Crater lake igwe kwụ otu ebe 2015 - esi lebara
Nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè gị gburugburu Crater Lake?
Ọdọ Mmirinwereotuunyi uzo ebe ugwuigwe kwụ otu ebekwere.IheGrayback Drive na-enye okporo ụzọ asatọ nke okporo ụzọ awara awara na enweghị ụgbọala. Ndị na-achọiheobi ụtọ nke otu egwu ụzọ ụkwụganwere anya n'èzíiheogige.Lake Crater na-emeenyela otu ugwu egwu ọ bụlaigwe kwụ otu ebeụzọ ụkwụ.Ọnwa Ise 18, 2021
Taa, a na m ekwu maka Oregon's naanị National Park Crater Lake Ihe iri kacha dị mkpa ị chọrọ ịma tupu ị rute ebe a, m laghachiri na njem Crater Lake ma nwee ọtụtụ ihe m chọrọ ka m nwee tupu m gaa na nke a. ọnụọgụgụ nke mbụ wụrụ m akpata oyi n'ahụ ịchọpụta na a ka nwere snow n'elu ala ị nwere ezigbo oge oyi ebe a na ndagwurugwu ọdọ ahụ n'eziokwu ọ bụ otu n'ime ebe kachasị snow na steeti niile na USA ebe a mgbe ụfọdụ ọbụna na-adịgide ruo mgbe june ya mere Gini ka nke ahụ pụtara nye gị? Kpachara anya maka imechi ụzọ. Parklọ Ọrụ National Park kwadoro ka ị gaa n’agbata Mee na Ọktọba.
Okporo ụzọ na echiche doro anya nke ọdọ mmiri kachasị mma. Marakwa oge ọkụ nke na-apụtakarị. n’oge ọkọchị ma nwekwaa ihe a na-elezi anya na mpaghara ahụ ebe ọ bụ na ọ dị osisi.
Nọmba abụọ bụ họtel. Mpaghara ọdọ mmiri ahụ dịpụrụ adịpụ dịka ị nwere ike ịhụ na eserese dị ka ọkara elekere site na Bend ma ọ bụ Eugene ma ọ dị ihe dị ka nkeji iri anọ na ise ma ọ bụ elekere elekere site na Klamath dị nso ma anyị na-akwado ịnọ na Klamath kwa nọrọ ebe anyị nọrọ na-adọba onwe ha nwee ebe obibi na mgbe m lere ọnụ ahịa ọ bụ ihe dịka 229 kwa ụbọchị na ebe obibi dị oke. Gbaa mbọ hụ na idobe tupu oge eruo.
Otu n’ime ihe tụrụ m n’anya karịa banyere ọdọ mmiri ndagwurugwu ma e jiri ya tụnyere ogige ntụrụndụ mba ndị ọzọ bụ na ọ bụ naanị otu ebe na-adọrọ mmasị ebe a bụ ọdọ. Isi ọrụ dị ebe a bụ ụzọ dị n'akụkụ, yabụ enwere echiche 30 dị iche iche ebe ndị mmadụ na-akwụsị, na-adọba ụgbọala ma were foto rute ihe dịka elekere 10 nke ụtụtụ ma ọ bụ ọdọ mmiri n'onwe ya abụghị ọdọ mmiri na-atụrụ ndụ, mmiri dị oke oyi, ọ dị ihe dị ka ogo 38. Nwere ike ịga igwu mmiri ebe a na ụfọdụ ndị na-eme njem njem m na-aga ebe a na-akpọ Cleetwood Cove Trail ma site ebe ahụ ị nwere ike igwu mmiri ma ọ bụrụ na ị biliri n'ihi na ma eleghị anya ị bụ ogige wim ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa na enweghị m ihe ọ bụla ndị mmadụ hụrụ na mmiri na ogige ahụ na-enye njem nlegharị ụgbọ mmiri Wizard Island site na mbido July ruo mmalite Septemba.
Lelee ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọ na-ewe oge njem na-agafeghị oke nke nwere oke mkpọda nke ihe dị ka 700 ụkwụ iji rute ebe ahụ Isi mmalite nke agwaetiti wizard ụgbọ mmiri a n'onwe ya bụ mpaghara na-enweghị ogige ka ọ ghara ịga ebe ahụ, agbanyeghị ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ị nweta ohere. ntụrụndụ n’ime ogige ahụ pere mpe karịa ogige mba ndị ọzọ m gara, ị nwere ike igwu mmiri n’ebe akpọrọ aha dịka m kwuru na mbụ. Meghee ọkụ dị oke oke n'ihi ihe egwu nke ọkụ.
N’ezie enwere njem njem, ịgba ịnyịnya ígwè, na ikiri kpakpando n’ihi na ọ nwere otu n’ime mbara igwe ndị doro anya n’elu ọdọ ndagwurugwu ahụ. Ihe na-esote bụ ebe ọbịa. Agara m eleta ndị ọbịa nọ n'ọnụ ụzọ ndịda, ọ tụrụ m n'anya na ọ bụ naanị ụlọ nri na ebe nchekwa.
Enweghị ọtụtụ ụlọ ihe ngosi nka na-akọwa ọdịdị ala ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme nke mpaghara ahụ, ọ bụ ihe dị mkpa nke mere na m ga-atụ aro iweta nri na ogige ahụ belụsọ ma ị nwere mmasị na Sanwichi dị mwute nke Sriracha debere maka ihe ndị ọzọ iji weta tupu ịbanye ogige ahụghị m ọdụ gas ọ bụla na ogige ahụ definitely ga-achọ n'ezie iweta mgbanwe n'ihi na ị ga-arịgo ihe dịka 6,000 ụkwụ ma weta ụfọdụ akpụkpọ ụkwụ na-eje ije. Enwere m akpụkpọ ụkwụ Kai Boon ebe a n'isiokwu m tụrụ aro maka akpụkpọ ụkwụ Salewa Jide n'aka na ị ga-eweta ụfọdụ ezigbo akpụkpọ ụkwụ siri ike. Ogige ahụ enweghịkwa ohere ịntanetị, ma e wezụga nke etiti ndị ọbịa, yabụ enwere ihe ị ga-ama.
Weta eserese gị ebe ị na-aga ma zute ndị ọzọ nọ n’otu gị ma ọ bụrụ na ị tufuo ma nwee eziokwu ụfọdụ na-atọ ụtọ gbasara ogige ahụ ụfọdụ eziokwu dị egwu banyere ogige ahụ anaghị adịkarị oyi ugbu a ị ga-elegharị anya niile snow na-eche ọdọ mmiri a gha ifriizi, mana adịkarịghị n'ihi ọbịbịa ya na Oke Osimiri Pasifik. Ihe nzuzo ọzọ na-adọrọ mmasị banyere ọdọ ndagwurugwu bụ na ọ nweghị ebe mgbokwasị ma nwee mmiri ozuzo okpukpu abụọ karịa ka mmiri na-ekpo. A na-ekwu na ịgagharị ga-enwe ọtụtụ ọhụụ Bigfoot.
Ọbụna ị ga-ahụ nnukwu ihe oyiyi Bigfoot na etiti ndị ọbịa. Ya mere lezienụ anya maka onye ukwu ka azụ ghara ịbụ nke mmiri si na ndagwurugwu, bụ nke na-atọkwa ụtọ na a makwaara ọdọ mmiri ndagwurugwu ahụ maka nnukwu agba anụnụ anụnụ. Ọ bụ ihe kacha acha anụnụ anụnụ nke m hụtụrụla n'ihi na nwanyị a enweghị sedimenti, enweghị mmetọ. Gaa na ọdọ mmiri ahụ ma ọ bụrụ na ị nọ na mpaghara Eugene ma ọ bụ Klamath Bend.
O doro anya na ị ga-aga njem ụbọchị ma ọ bụ izu ụka izu ụka anyị na Oregon Aga m ejikọ ha ebe a anyị gara ọtụtụ ebe dị iche iche na Oregon, enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme gburugburu Bend na Klamath ya mere lelee ha ma nwee ọ themụ na ha pịa isi ike ma ọ bụrụ na ịchọrọ karịa nke isiokwu ndị a ma hụ na ịdenye aha
Kedu ka m ga-esi gba igwe kwụ ọtọ na Crater Lake?
Gbagoo n’obere ngalaba gburugburu Llao Rock. Mgbe ahụ ụsọ oké osimiri 3 kilomita gbadara gaa na Cleetwood Cove na-adọba ụgbọala. Enwere ụlọ mposi ebe a ma ọ bụrụ na ị bụ n'ezie adventurous pụọ naigwe kwụ otu ebema bulie a 1.2 kilomita nkpoda nzọ ụkwụ naanị ohere kaọdọna ohere ima elu na mmiri oyi.
Olee ihe dị ize ndụ Crater Lake?
Ọdọ Mmiribu ihe itu anyadị ize ndụebe, na otutu ndi mmadu anwuwo n'ebe ahu. Ọtụtụ n’ime ha hapụrụ naanị ọkpụkpụ iji nyere anyị aka ịghọta ihe kpatara ọnwụ ha. Naanị ogige mba nke Oregon bụ ihe ịtụnanyadị ize ndụebe. Naanị ogige mba nke Oregon bụ ihe ịtụnanyadị ize ndụebe.2 ụbọchị gara aga
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbaa ụgbọala gburugburu Crater Lake Rim Drive?
Banyere 30-40 nkeji ma ọ bụrụ na ịmeeemela nkwụsị ọ bụla. Mana enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ n'ụzọ niile ka oge gị wee dị iche. ihe karịrị otu afọ gara aga. Ọ bụrụ na ị gbara ụgbọalagburugburun’akwụsịghị akwụsị, yaga-ewere1.5 awa.
Crater Lake adịghị n’efu?
Ọdọ MmiriOgige Ntụrụndụ nwere ụgwọ mbata kemgbe mmalite afọ 1900. Ogige ahụ bụ otu n'ime saịtị Ọrụ Ntụrụndụ 117 National Park na-ana ego n'ọnụ ụzọ mbata, ogige ntụrụndụ 300 ndị ọzọ ga-anọgiden'efuịbanye.Eprel 16 2018
Enwere m ike ịkwọ ụgbọala na Crater Lake?
Ọdọ MmiriRim Ebe nkiri.Gbọalabụ 50.2 mile kpamkpam ahia ahia loop nzọ ụkwụ dị nsoỌdọ Mmiri, Oregon nke na-egosipụta aọdọọ dịkwa mma maka ọkwa nka niile. Zọ a bu ụzọ ejiri mee njem maka okike, ikiri nnụnnụ na ebe nkiriịnya ụgbọ alaọ kachasị mma iji ọnwa Mee ruo Ọktọba.
Gini mere o ji di egwu?
Na Cleetwood nzọ ụkwụ bụ naanị iwu ịnweta naọdọ, 'McCabe kwuru. N'ime ndagwurugwu ahụ, snow na okwute anaghị akwụsi ike ma nwee ike ibute ọgbaghara na nnukwu mmiri, dị ka ogige mba ahụ si kwuo. 'Ọdọ mmiribụ ugwu na-agbọpụ ọkụ, ala ahụ dịkwa nnọọ njọ,ya merema ọ bụrụ na ị na ala yadị oke egwu.Bọchị 18 2020
Ọgba a nwere oghere ọwa?
Enweghị ihe akaebe na nwa afọazụebi n'imeỌdọ Mmiri. A na-eme atụmatụ ugbu a naọdọna-akwado ihe dịka 60,000 kokanee salmon (Oncorhynchus nerka; salmon salkon na-adịghị ekpo ọkụ) na egwurugwu egwurugwu.Ọnwa Isii 28. Dec 2019
Kedu oge kacha mma n'afọ iji gaa Crater Lake?
Ndị kasị ewu ewu na ọnwa kagaa Crater Lakebụ July, August, na September. Ọ bụ mgbe ahụ ka ụzọ, ụzọ ụkwụ na ụzọ izizi na-emeghe n’ogige ahụ. May na June bu onwa mgbanwe n’ime ogige ahu, ka oge oyi na-eji oge okpuru ekpu.
Crater Lake Worth na-eleta?
Ọdọ Mmiribụ ọmarịcha!Ọ bụa eke ebube na kpam kpamkwesịrị ịhụ. Otú ọ dịỌ bụa ogologo ụzọ si Portland, na ị na-enwe 4 ụbọchị.June 18. 2016 Nọvemba
Enwere ụzọ ụkwụ ịgba ịnyịnya ugwu ọ bụla na Crater Lake?
Lake Crater adịghị enye ụzọ nzọ ụkwụ igwe ugwu ọ bụla. Ọrụ nke ịnyịnya ígwè na-agba ịnyịnya na-eto eto na-ewu ewu n'ọtụtụ ebe ezumike oyi. Iwu ogige ugbu a na-amachibido iji na arụ ọrụ nke igwe kwụ otu ebe na-adị n'okporo ụzọ oyi n'ime ogige ahụ.
A ga-agba ịnyịnya na Crater Lake?
Ebe ọ bụ na Crater Lake National Park dị n'okpuru mpaghara gọọmentị etiti, Gbaa ịnyịnya na rim 2021 ga-agbaso ụkpụrụ nduzi niile edobere n'oge nke ihe omume banyere ọrịa Covid-19. Dabere na ihe nduzi enyere, enwere ike inwe ọnọdụ ebe Gbaa ịnyịnya rim nwere ike ịmanye ịkagbu ọzọ.
Kedu iwu ndị na-agba maka ọdọ mmiri na-agba igwe?
Iwu 1 na Nchekwa igwe kwụ otu ebe. Ndị na-agba ịnyịnya ígwè ga-asọpụrụ ma rube isi n'iwu niile metụtara ụgbọ ala, gụnyere ịgba ọsọ na akara akara. 2 Ugwu Ugwu. Ọdọ Mmiri Crater nwere otu okporo ụzọ na-adịghị ọcha ebe a na-ahapụ ịnyịnya ugwu. 3 Oyi na-acha uhie uhie oyi. 4 Maa ụlọikwuu. 5 Na-enweta ebe a site na igwe.